अष्ट्रेलियालाई जित्नै पर्ने दबाब भारतलाई – bampijhyala.com
Home > खेलकुद > अष्ट्रेलियालाई जित्नै पर्ने दबाब भारतलाई
२१ मंसिर २०७७, आईतवार १३:५२ bampijhyala
२१ मंसिर, बाँपीझ्याला, एजेन्सी । भारत र अष्ट्रेलियाबीचको तीन टि२० आई खेलको सिरिज अन्तर्गत दोस्रो खेल आज हुँदैछ । खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो १ः५५ पछि सिड्नी क्रिकेट मैदान सिड्नीमा सुरु हुने छ ।
स्टिभ स्मिथ र ग्लेन म्याक्सवेल प्रमुख हतियार हुन् । यी दुई ब्याट्सम्यानलाई जिम्मेवारीका साथ उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्न आवश्यक पर्दछ ।
पहिलो टि२० खेलमा तीन विकेट लिनुको साथै ३० रन जोडेका अलराउन्डर मोइजेस हेनरिक्स भारतलाई टाउको दुखाईका खेलाडी बन्न सक्छन् । घाइते अलराउन्डर मार्कस स्टोइनिस खेल्ने वा नखेल्ने अन्यौल छ ।
ओपनर लोकेश राहुलले पहिलो टि२० खेलमा ५१ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेलेका थिए । पछिल्लो समय राम्रो लयमा रहेका उनलाई रोक्न कठिन पर्न सक्छ । शिखर धवन र कप्तान विराट कोहलीलाई पनि उच्च प्रर्दशन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
कोहली र धवन पहिलो खेलमा सस्तैमा आउट भएका थिए । हार्दिक पान्ड्या राम्रो लयमा छन् । उनको लयलाई रोक्न अष्ट्रेलियालाई चुनौती हुने देखिन्छ । सन्जु स्यामसन मध्यक्रम सम्हाल्ने छन् ।
पहिलो खेलमा ४४ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेलेका रविन्द्र जडेजा टोलीबाट बाहिरि सकेका छन् । तीव्र गतिका बलरमा टि नटराजन, जस्प्रित बुमराह र दीपक चहरको सम्भावना छ ।
पहिलो खेलमा बुमराहलाई विश्राम दिएका थियो । दोस्रो खेलमा मोहम्मद शामीको स्थानमा बुमराहलाई खेलाउने सम्भावना छ । शामीले पहिलो खेलमा ४६ रन खर्चिदा विकेट लिन सकेका थिएनन् ।
पहिलो खेलमा तीन विकेट लिएका लिदै जितमा नायक बनेका स्पिनर चहल दोस्रो खेलमा पनि उच्च मनोबलका साथ मैदान प्रवेश गर्ने छन् । कसिलो बलिङ गरेका वासिन्टन सुन्दर स्पिनरको रुपमा खेल्ने छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै २१ मंसिर २०७७, आईतवार १३:५२
हिलोन् नये व्यथा (फंगल इन्फेक्शन) गिनागु ? २१ मंसिर २०७७, आईतवार १३:५२
थनु लुँय भाउ थिरकु २१ मंसिर २०७७, आईतवार १३:५२
बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा र निक्षेप नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन बैंकको कति ? २१ मंसिर २०७७, आईतवार १३:५२
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै २१ मंसिर २०७७, आईतवार १३:५२